China FOTON BJ6103 / BJ6105 fekitori uye vagadziri | Foton
10M DZAKATEVEDZANA KOCHI
Foton BJ6103 / BJ6105 akateedzana murairidzi chiratidzo chekuswedera kwayo kune kugona, mhando uye kunatsiridza. With vakura mukugadzira muitiro uye wakadzikama okutengesa wegore, izvozvo akahwina zvikuru rudo pakati vatengi uye vatengi.
Kunopindirana Dimension 10490 * 2500 * 3380
Max. Kubudirira ≥30%
Kurambidza Kurema 10.35T
Kugara Kugona 54 + 1
Kunoshamisa kusanganisa kwekugona uye kugadzikana 10M akateedzana murairidzi anodakadza neakanyanya-anoshanda powertrain, yakamisikidzwa injini mashandiro ane yakaderera kudyiwa, yakakura hunyanzvi nzira kubva kune yakawanda yekushandisa ruzivo.
Injini yemakamuri ine tembiricha yekuyera yeiyo chaiyo-nguva yekutarisa uye yekuzvidzimisa yega mudziyo kuona chaiyo-nguva yekutarisa; firewall simbi mahwendefa anoiswa kuve nani kuve nechokwadi chengetedzo yemutyairi uye vafambi; murazvo-unodzivirira zvinhu uye A-giredhi murazvo-unodzivirira zvinhu zvine zvirinani chengetedzo mashandiro anoshandiswa akatenderedza ako ekupisa sosi.
Foton muridzi weNational standard-level mitsara yekuita digitization, kumhanya bvunzo rig, kona yekuyera-mubhedha, axle mutoro, ABS bvunzo-mubhedha, brake bvunzo yekutsvaga system uye vamwe, Kuchengetedza chitupa uye kubvumidzwa kubva kuGerman TUV Rheinland neCNAS yenyika murabhoritari.
Foton yakarongedzwa nehunyanzvi bhenji mabhenji uye akasiyana-siyana bvunzo maturu kuvimbisa kuvimbika uye kugona kwemidziyo uye masisitimu ayo Bhabhoni rebhokisi rakaiswa. Iine chimiro chakaomarara uye chakasimba, bhazi reFoton rinomira padivi-ne uye musoro-pazvibodzwa pamwe nekudzivirira kukwirisa kwepamberi. Vasati vapinda mubasa, vanoedzwa zvakanyanya uye kuongororwa.